Waa Kuma Rashiid Sheekh Cabdillaahi 'Rashiid-Gadhweyne'W/Q: Boobe Yuusuf Ducaale
Sunday May, 27 2018 - 14:35:41
Wednesday January 17, 2018 - 17:12:07 in by Burco Office
Rashiid Sheekh Cabdillaahi Xaaji Axmed, wuxuu sannadkii badhtamahii afartannadii qarnigii labaatanaad ku dhashay magaalada Cadaadley
oo ku taal bariga Hargeysa. Waxbarashadiisii Quraanka iyo Dugsiga Hoose wuxuu ku qaatay Cadaadley iyo Haro-sheekh; tii dhexe na wuxuu ku qaatay Burco. Sannadkii 1963kii ayuu deeq waxbarasho u tegay dalka Masar, halkaas oo uu ku dhammaystay tacliintii dugsiga sare iyo jaamacadeedba; wuxuna ku takhasusay Cilmiga Bulshada (Sociology). Waxa kale oo ui si gaar ahaaneed u dersay oo si qoto leh u guda-galay aqoonta, fikir, falsafad iyo faaqidaadda suugaanta. Sannadihii 1968kii ilaa 1982kii, waxa uu ka shaqeeyay wasaaradahii Waxbarashada iyo Barbaarinta. Tacliinta Sare, Xafiiskii Siyaasadda iyo Xisbigii Hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed, Jaamacaddii Ummadda iyo Akaademiyadii cilmiga iyo Hiddaha iyo Dhaqanka Soomaaliyeed.
1982kii wuxui kamid noqday xubnihii SNM gudaha dalka ka aasaasay ee xuduudda ka tallaabay ee halgankii hubaysnaa bilaabay. Waxa uu kamid ahaa aqoonyahannadii shirweynayaasha ururka hoggaaminyey; Shirweynihii afraad, 1984kii iyo kii lixaad ee 1990kii, labadaba wuxuu ka ahaa Guddoomiye ku-xigeen koowaad. Xilalka uu SNM kasoo qabtay waxaa kamid ahaa: Madaxa xafiiska Addis-ababa. Agaasimihii SNM ee Radio Halgan ilaa 1988kii, kaddibna Xoghayihii Arrimaha Debedda. Wakhtigii ay Soomaalilaan ka dheceen dagaallada sokeeye, 1994kii-1996kii, wuxuu kamid ahaa Guddidii Nabadaynta ee dib-uheshiisiinta Soomaalilaan u hawl-gashay. 1997kii-2007dii, wuxuu ahaa Guddoomiyaha Guddida Baadhista Dembiyadii Dagaalka (Guddida Xasuuqa).
Rashiid Sheekh Cabdillaahi waa qoraa wax ka qora arrimaha bulshada iyo fikirka; waana suugaan-dhaadhi si qoto leh u faaqida suugaanta Soomaalida si gaar ah maansada. Waxa uu leeyahay buugaag iyo maqaallo tiro badan oo ku qoran afafka Soomaaliga iyo Carabiga.
W/Q: Boobe Yuusuf Ducaale
Hargaysa:-Masuul Ka Tirsanaa Xukumadii Hore Ee Soomaliland Oo Si Adag Ula Hadlay Putland Sidoo Kalena Canbaareeyay Colaada Ceelafweyn Ka Taagan
19/05/2018 - 00:21:01